ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေလို ချက်ချင်း ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Maybelline | CosmeticMyanmar
Home » Article » ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေလို ချက်ချင်း ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Maybelline
ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသားအရေလို ချက်ချင်း ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Maybelline
ဟေး Beauties ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေကို ကလေးလေးတယောက်ရဲ့ အသားအရေလိုမျိုး နုပျိုချင်ကြလဲ? ကိုယ်တွေကတော့ ထိပ်ဆုံးကပါပဲ 😛 ဘယ်လိုပဲ ပစ္စည်းအသစ်တွေထွက်လာထွက်လာ အဲ့ဒီ ပစ္စည်းအသစ်လေးတွေနဲ့ အပြိုင်ရောင်းအားကောင်းဆဲ လူကြိုက်များဆဲဖြစ်တဲ့ Maybelline Baby skin instant pink transformer လေးအကြောင်းပြောပြမယ်နော်။
ဒီပစ္စည်းလေးကို တွေ့လိုက်တာနဲ့တင် တကယ်ပဲ လိုချင်ဖွယ်ရာ ချစ်စရာပုံစံလေးပါ။ အရောင်လေးကလည်း အပန်းရောင်လေးဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေ အကြိုက်ပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများ တွေးမိလေ့ရှိတာလေးကတော့ ဒီပစ္စည်းက ဘာလဲ? Primer လား Highlighter လား အောက်ခံ မိတ်ကပ်လား စသည်ဖြင့် တွေးတောမိကြပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးကိုကတော့ နေရောင်ခံလိမ်းတဲ့ အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Highlight လုပ်ဖို့ ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Make up သားလေး ရှိချင်လို့ Foundation or BB တို့နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တွဲသုံးပေးလို့ရပါတယ်။
ပြီးတော့လဲ SPF 35 တောင်ပါသေးတယ်။ သူတစ်မျိုးတည်းသုံးတာတောင် အသားအရည်လေးက ဝင်းလာပြီး သဘာဝအတိုင်း ပန်းရောင်လေးသန်းလာတာတောင် ခံစားရတယ်။ အသားအရေမှာ လိုအပ်တဲ့ ရေဓါတ်ကိုလည်း အပြည့် အဝ၂၄ နာရီလုံး ဖြည့်တင်းပေးနိုင်စွမ်းလဲရှိတယ်။
ဒီပစ္စည်းလေးကိုတော့ ချယ်ရီ အဆီအနှစ်၊ ဗီတာမင်စီ တို့နဲ့ အဓိကပါဝင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းလေးကို သုံးစွဲဖူးတဲ့ သူတော်တော်များများကလည်းနှစ်ခြိုက်ကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သုံးရတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ရလာတဲ့ရလဒ်ယှဉ်ကြည့်ရင် အရမ်းတန်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အသားအရေလေးက တနေကုန် စိုပြေဝင်းပပြီး ရေဓါတ်ပြည့်ဝနေတာမို့လို့ သုံးစွဲဖူးသူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတာပေါ့။
Image source : MaybellineMyanmar
နှုတ်ခမ်းလွှာလေးရဲ့အလှတွေ ကြာရှည်ခံနေစေဖို့ Longlasting Lipstick ရှာဖွေနေပါသလား??